Okumele ukwenze nokungafanele ukwenze kokumaketha kokuqukethwe | Martech Zone
Okumele ukwenze nokungafanele ukwenze ngokukhangisa kokuqukethwe
NgoMsombuluko, Septemba 30, 2013 NgoLwesibili, Okthoba 1, 2013 Douglas Karr
Kulungile, nakhu ukuhleka kwakho ntambama. Isebenzisa IMeltwater Buzz, Sivele sabona le infographic elula nenhle ihlinzeka ngohlu oluhle lokuhlola lwezinto umuntu angafuna ukuzigcina engqondweni lapho enza isu labo lokuthengisa lokuqukethwe.
Omunye wemithetho maqondana nokubhuloga ngu Ungashicileli ibhulogi ebhalwe kabi. Ngikubonile ukubhala okuningi okungalungile (ngaphandle kwesihloko, ukusho umbono njengeqiniso, okungenangqondo) okusenohlelo lolimi nesipelingi, ngakho-ke ngikholwa ukuthi lokho abebeqonde ukuthi ibhulogi engabhalwanga kahle. Okuthunyelwe kwami ​​kuvame ukubhalwa kabi… kepha ngicabanga ukuthi basenakho okuqukethwe okubalulekile ingxenye enkulu… ohlelo lolimi kanye nama-orthographer? Ngokubona kwami, inani lokuqukethwe kwakho lishaya ukuthi libhalwe kahle kanjani. Lowo ngumbono wami nje ngoba ngincela uhlelo lolimi nesipelingi, noma kunjalo.
Ukube bengizokwenza ukuma ukuthi konke okuqukethwe kwakho kufanele kubhalwe ngokucophelela, ngingahle ngibe nenkinga yangempela ngalo infographic. I-infographic ibizwa nge- Ama-Do's ne-Dont's Marketing Okuqukethwe. Ngisho nokungalwazi kwami ​​ulimi lwesiNgisi okwesabekayo kungenze ngathatha kabili esihlokweni. Akufanele kube yi- Okumele ukwenze nokungafanele ukwenze ngokukhangisa kokuqukethwe?
Okthoba 1, 2013 ngo-9: 23 AM
Amathiphu amangalisayo uDoug! Uyibethele futhi .. ngibe nokufunda okunolwazi kakhulu .. Siyabonga ngokwabelana!
Okthoba 3, 2013 ngo-7: 25 AM
Sawubona Douglas, ngiyabonga ngokwabelana. I-infographic enhle kakhulu, enezeluleko eziningi eziwusizo. Angikaze ngiqaphele i-typo esihlokweni, ngize ngifunde umbono wakho kokuthunyelwe 🙂 Futhi uqinisile, kufanele kube "Okufanele".